Duur-joogta: “Baabuurta oo keliya uma baahna in la cilad bixiyo” [Sheeko xiiso leh] | Somaliska
Inta aadan qoraalkan akhrin waxaad si fiican u fiirisaa sawirka kuu muuqda ee ah dhismaha iyo xayawaanka hor dhooban. Waxaa laga yaabaa inaadan deg deg u arkin xayawaanka hortaagan dhismahaasi.
Hadaba xarruntu waa goob garaash ah baabuurta lugu cilad bixiyo, waxaana sanad kasta taga baabuurta oo eegga si loo hubiyo fayoobiyad gaariga taas oo ah sharuuda ay dejiay waaxdda gaadidka dalka. Hase ahaatee arrinta xiisaha leh ayaa ah in duur joogta baciidka loo yaqaana ay soo hor dhoobteen garaash-ka hortiisa siddii ineey leeyihiin “Shirkii habar dugaag baanu ka qeyb galeeynaaye fadlan naga furan alaabka oo korkeena wasaqeeysan dhaqa yaan nala caayine!”
Hadaba nin lugu magacaabo Sune Andersson ayaa isagoo ag maraya xaafad warshaduhu ku badan yihiin, arkay muuqaal aad u soo jiitay kaas oo ah in horin baciidka duur joogta ahi ay soo hor dhoobteen afaafka hore ee garaasha Bilprovningen-ka ee baabuurta lugu cilad bixiyo. Wuxuu in door ah taagnaa goobtaasi, isagoo ay maskaxdiisu qaadan weeysay halka ay taagan yihiin oo ah garaash-ka baaburta. Wuxuu isweydiiyey “taloow iyagana ma la cilad bixinaya oo balan miyey meesha ku leeyihiin”.
“Waa markii ugu horeesay ee aan arko baciid sidaa u tirro badan oo hor dhooban goob weliba garaasha-ka baabuurta lugu hagaajiyo siddii ineey sugayaan in albaabka laga furo oo iyagana la meeyro korkooda ama la cilad bixiyo” ayuu yiri isagoo u waramayey taleefeyshinka SVT. Ma ahan Sune oo kaliya dadkii aad ula yaabay baciidka hor dhooban garaash-kaasi, ee waxaa sidaasi si la mid ah ula yaabay cid kasta oo soo marta kuna reebta guux iyo isla hadal, waxaana Sune noqday qofkii ugu horeeyey ee muuqaalkaan soo dhigta bartiisa facebook-ga.